ဝက်သားဒညင်းသီးပေါင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဝက်သားဒညင်းသီးပေါင်း	15
Posted by အောင် မိုးသူ on Jul 17, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., How To.. | 15 comments
ဒီနေ့တော့ ဝက်သားနဲ့ ဒညင်းသီး နှပ်စားဖို့ စဉ်းစားထားတာနဲ့။ ဒညင်းသီးဝယ် ပြုတ်ထားလိုက်တယ်။
ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း အပြင်မှာရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလို ပြုတ်တဲ့ရေတွေ မမည်းအောင် ဂရုစိုက်ရတယ်။
ရေတွေမည်းသွားတယ်ဆိုတာကလည်း ဒညင်းသီးရဲ့ အခွံက အမှုန်တွေကြောင့်လေ။ အဲ့ဒါကြောင့်
ဒညင်းသီးကို အခွံကွာရုံခဏပြုတ်ရပါတယ်။ ပြီးရင် ရေအေးနဲ့စိမ် အခွာတွေကိုနွှာပြီး ရေအသစ်နဲ့
ပြန်ပြုတ်ရင် ရေတွေလည်း မည်းမနေတော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ပိုအရသာရှိအောင် ဆားအနည်းငယ်
သကြားအနည်းငယ် ပဲငံပြာရည်နဲ့ ဟင်းခတ်မှုန့် အနည်းငယ်ထည့်ပြီးပြုတ် ပိုအရသာရှိပါတယ်။
ဝက်သားနဲ့ဒညင်းသီးနှပ်တဲ့ နေရာမှာတော့ ကျတော်က လုံးချက်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဝက်သားကိုဆေး
ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးမလှီးပဲ လေးစိပ် ကြီးရင် ခြောက်စိပ်ခွဲထည့်ပါတယ်။ ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ နှစ်မွှာလောက်ကို
ညက်အောင်ထားပြီးထည့်မယ်။ ဆားအနေတော် ဟင်းခတ်မှုန့်နေရာမှာ ကျတော်ကတော့ အချို့မှုန့်မသုံးပါဘူး။
City mart တွေမှာ ရွှန်းတိုးတိုး အချိုမှုန့်အစားထိုး ဟင်းခတ်မှုန့်ရှိပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်လို မှုန့်ညက်နေတဲ့ အမှုန့်ပါ။
အချိုမှုန့်လို သူ့အချိုက လျှာပေါ်မစွဲပါဘူး။ အချိုမှုန့်လောက်လည်းမချိုပါဘူး။ ဟင်းအရသာလည်းကောင်းပါ
တယ်။ ဈေးကတော့ အချိုမှုန့်ထက်အနည်းငယ်ကြီးပါတယ်။
ဝက်သား ကြက်သွန်လေးစိတ်ကွဲ ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ ဆား သကြား ဟင်းခတ်မှုန့် ငရုတ်ကောင်း ငါးလုံးလောက်
ထောင်းပြီးထည့်တယ်။ ပဲငံပြာရည်ဆမ်းမယ်။ ဒညင်းသီးထည့်မယ်။ ပြီးရင် အားလုံးကို ရောနယ်မယ်။
ခဏနှပ်ထားမယ်။ ဆီသိပ်မလိုတဲ့အတွက် ဆီအနည်းငယ်ကို ဆူအောင်တည်ထားမယ်။ နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်
ထည့်မယ်။ ပြီးရင် လုံးထားတဲ့ ဝက်သားနဲ့ဒညင်းသီးကို ထည့်မယ်။ ရေမြုပ်ရုံထည့်မယ်။
ဝက်သားနူးအောင်ရယ် ဒညင်းသီးထဲအရသာဝင်အောင်ရယ် ကြက်သွန်အနှစ်ဖြစ်သွားပြီဆို ဝက်သားဒညင်းသီး
နှပ် ကောင်းကောင်းရပါပြီ။ ချိုပြီး စေးနေတဲ့ ဒညင်းသီးက တော်တော်စားကောင်းတာပါ။
ဒညင်းသီးဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူးဆိုပေမယ့် ကျတော်ကတော့ ခုထိ မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့
ဒညင်းသီးဟာ ပထမက ကျတော်ပြောသလိုပြုတ်မယ်ဆို ကျန်းမာရေးနဲ့အညီညွတ်ဆုံးပါပဲ။ ပြုတ်စားတာဟာ
ဒညင်းသီးရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို အလျော့နည်းဆုံးဆိုပေမယ့် ကျတော်ပြောသလိုပြုတ်စားမယ်ဆို ပိုမိုနည်းပါးမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ချက်ပြုတ်နိုင်ကြပါစေ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဝက်သားမစားဘူးအေ ဒညက်းသီးပဲကော်စားသွားဒယ်။ ကြက်သားလေးနဲ့နောက်တခွက်ပြန်ချက်ပေး
အောင် မိုးသူ says: ဒညင်းသီးချည်းပဲ နှပ်စားတာ တင်ပေးမယ် နောက်ရက်ကျရင်
ဇီဇီခင်ဇော် says: http://mandalaygazette.com/190810
မြစပဲရိုး says: ဒညင်းသီးမစားရ တော့ တာ နှစ် က ဆယ်စု မက တော့ဘူး။
အရင်က ကြိုက်တာ မှ ဒီ အတိုင်း ထိုင်စား တာ။
ဟင်းချက်စားတာ ထက် အပြုတ်အတိုင်း တို့ စားတာ များတယ်။
. ကြည့်ရတာ အတော် အရသာ ရှိမဲ့ ပုံဘဲ။
ဒါထက် ဒညင်းသီး မှာ ပါတဲ့ အညှောင့်လေး တွေ ကို ဖယ်စား ရတယ် ပြောကြတာဘဲ။
ပုံ(၃) မှာ တွေ့နေရတယ်။
aye.kk says: ဝက်သားဒညင်းသီးပေါင်း
အခုချက်နည်းလေးကိုသိတော့ စားချင်စရာမို့ ကျေးဇူးတင်မိတယ် ။
Ma Ma says: ဒညင်းသီးဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုမှာ ဒီပိုစ့်ဖတ်မိတယ်။ နောက်ဆုံးက ဆုတောင်းကို အားလုံးချက်ပြုတ်နိုင်ကြပါစေအစားးးး
ဘကြီးအောင် ချက်ပြုတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပြောင်းပေးလိုက်မယ
ဘာလို့ဆို…. ၀ီလီကျောက်ပွဲက နီးသည်ထက် နီးလာပြီကိုးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဒညင်းသီးကို ကျတော်ပြောသလိုစားရင် ဘေးအကင်းဆုံးပါ
ဦးကြောင်ကြီး says: .. အောင်မိုးသူ ကြောင်ခိုးယူ မှောင်အိုးခြူ တောင်ရိုးဖြူ …
တောင်ပေါ်သား says: Thanks…. I will cook tomorrow ( Super-Sunday ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 672
YE YINT HLAING says: ဝက်သား ဒညင်းသီး ကြက်သွန်နီ/ဖြူ ခရမ်းချဉ်သီး အရောင်တင် ဆီ ဆား အချို မှူန့် ထည့်ပြီး တနေ့ကပဲ စားချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ ချက်စားကြည့်ခဲ့တယ် ။ စားလို့ မကောင်းဘူး ။ အခုပေးတဲ့နည်းလေးနဲ့ ချက်စားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဒညင်းသီးက အချိုချက်တာပဲကောင်းတာ။ နောက်ရက်ကျရင် ဒညင်းသီးကိုနှပ်စားတာ တင်ပေးဦးမယ်။
Mike says: .ဒညင်းသီးတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်..ငယ်ငယ်ကဆို အမေကအများကြီးဝယ်ပြုတ်ပေးတာ
.အောင်မိုးသူချက်တာစားရင် သွေးတိုးသမားတော့ တန်းဂန့်မှာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဖြတ်တတ်ပါတယ်။ အိမ်မှာက သွေးတိုးရှိတဲ့သူ နည်းတယ်ဗျ။း)) ဒညင်းသီးနဲ့ အုန်းနိုးနဲ့ချက်တာ လာဦးမယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: ဒညင်းဝက်ကိုရော ဘယ်သူ ကြိုက်လဲဟေ့
အောင် မိုးသူ says: ဒညင်းဝက်က ရွံစရာကြီး ဟိဟိ